« Combat pro » – Sina: resy i Tojo Heriniriana | NewsMada
« Combat pro » – Sina: resy i Tojo Heriniriana
Niatrika ny fifaninanana faharoa, amin’ilay ady anaty fefy, atrehiny any Sina, ny asabotsy lasa teo, i Tojo Heriniriana, eo amin’ny «combat pro», sokajin-danja 56 kg. Resy teo amin’ny ampahefa-dalana izy, nanoloana ilay teratany sinoa, laharana voalohany any Sina, isan’ny tena efa ambony traikefa. Tsy mora, araka izany, ny nanoheran’i Tojo ity mpifanandrina taminy ity.
«Tsy manadino ny misaotra anareo rehetra nanohana ahy ny tenako, na teo aza ny faharesena», hoy i Tojo. Hery lehibe nahafahana nanomana sy niatrika iny ady iny izany fanohanana izany, araka ny fanamarihany. Traikefa lehibe izao nahafahany niatrika voalohany ady anaty fefy izao, na indroa ihany aza ny nanaovany izany.
Tsy tapitra hatreo ny lalan’i Tojo, eo amin’ity taranja ity. Hisy sahady ny ady hatrehiny, ny volana oktobra izao, eo amin’ny “combat pro” hatrany izay mbola angatahany ihany ny fanohanan’ny rehetra. « Tsy misy fotoana hipetrahana fa manomana avy hatrany ity ady manaraka hatao aty Sina ity, vonona hitady fandresena hatrany », hoy ny fanazavan’i Tojo Heriniriana.